Ukuvula i-iPhone nge-IMEI ngexabiso elifanelekileyo
Ukuba ujonga njani vula i-iPhone nge-IMEI Ngazo zonke iziqinisekiso kunye nexabiso elifanelekileyo, emva koko yenze ngokuzithemba kwe-Actualidad iPhone kunye neLeberaiPhoneIMEI. Ukwenza oku kuya kufuneka ukhethe ilizwe, umqhubi we-iPhone yakho kwaye ufake i-IMEI yakho. Ukuba awumazi umsebenzisi wakho okanye ukuba i-iPhone yakho ixeliwe ngobusela, ikwanenkonzo ekufumanekayo ukuyifumana.
1 Uyazi njani i-IMEI ye-iPhone ukuyivula?
2 Indlela ukuvula iPhone yi IMEI?
Uyazi njani i-IMEI ye-iPhone ukuyivula?
Zininzi iindlela eziza kusivumela fumanisa i-IMEI ye-iPhone yethu, Ukuqala ngokubanzi kufumaneka nakweyiphi iselfowuni. Egqibelele iindlela zokufumana le khowudi Zizo zilandelayo:
Ukusuka kwikhiphedi yamanani: Siza kuyiphumeza le nto ngokuvula usetyenziso lweFowuni, ngokuthepha kwiKhibhodi kunye nokufaka ikhowudi 06 #. Inani liza kuvela kwiscreen. Ukuphuma, sichukumisa Kulungile.
Ukusuka kuseto lwe-iPhone: Sinokubona i-IMEI yethu ngokungena kuseto / Jikelele / kuLwazi kunye nokutyibilika ukuya apho singafunda khona i-IMEI.
Ukujonga imeko ye-iPhone: le kunokuba yeyona ndlela ilula, ukuba nje sinebhokisi ekufuphi. I-iPhone IMEI ikwisitikha ngasemva kwaye ibonakala njengenombolo ye-IMEI / MEID.
Indlela ukuvula iPhone yi IMEI?
Ukuvula i-iPhone nge-IMEUkusuka kwinkonzo ebonelelwe yi-Actualidad iPhone kunye neLeberaiPhoneIMEI ayinakuba lula. Inkqubo iya kuba yile ilandelayo:
Sikhetha ilizwe phakathi kweSpain, iUnited States okanye iMexico ngokunqakraza kwiithebhu ezingasentla kwetafile enikezela ngenkonzo.
Nje ukuba ilizwe likhethwe, kuya kufuneka sikhethe umsebenzisi wemvelaphi ye-iPhone yethu. Ukuba i-iPhone yethu ivela komnye umsebenzisi okanye ilizwe, siza kucofa "KWEZINYE IINKCUKACHA" kwaye siya kuba nakho ukubona uluhlu olubanzi lwamazwe nabaqhubi. Kufuneka kuqatshelwe ukuba kwimeko yaseSpain, unako khupha i-iPhone kwiziphathamandla eziphambilis njengeVodafone, iorenji okanye iMovistar phakathi kwezinye.
Emva koko, singena kwi-IMEI ye-iPhone esifuna ukuyikhupha kwibhokisi engezantsi kwesicatshulwa esithi "Faka i-IMEI yakho apha."
Kuya kufuneka sibeke i-imeyile yonxibelelwano kwibhokisi engezantsi kwesicatshulwa «Faka i-imeyile yakho apha». I-imeyile iya kusetyenziswa kuphela kwaye ngokukodwa ukuba usazise ukuba iPhone sele ivuliwe.
Cofa kwiqhosha elityheli ukuhlawulela inkonzo. Sinokukhetha ukuhlawula ngekhadi letyala okanye ngePayPal.
Nje ukuba sihlawulwe, sinokulinda kuphela ukufumana i-imeyile yokuqinisekisa apho baya kuthi basixelele ukuba i-iPhone ikhutshiwe kwaye inokusetyenziswa kunye nawuphi na umsebenzisi.
Uyibona njani, inkqubo ye ukuvula iPhone intanethi Ayinakuba lula. Ukuba ufuna ukwazi umqhubi wesiphelo sendlela ngaphambi kokuyikhulula, nantsi sichaza ukuba uyazi ukuba yeyiphi inkampani eyi-iPhone.